News - nsw-api-600-ọnụ ụzọ ámá-valve-packing
Ichekwa na nnọchi nke API 600 Gate Valve mbukota
Nchekwa usoro nke valvụ mbukota:
Ndị na-ekpo ọkụ nke oru a bụ ihe abụọ: PTFE na graphite dị nro.
Mgbe echekwara ya, kaa ya akara n'ime akpa ma ọ bụ igbe. Chekwaa nke ọma na ụlọ nkwakọba akọrọ na ventilated, zere ìhè anyanwụ. Lezienụ anya na ventilashị n'oge nchekwa ogologo oge, ma chịkwaa ọnọdụ okpomọkụ nke ebe nchekwa ahụ agaghị agafe 50 Celsius C iji gbochie oke ájá. Ọ bụrụ na ewepụrụ ájá dị na elu nke filler ma jiri ya, hichaa ya na akwa dị ọcha.
Usoro ngbanwe valvụ:
A na-ekechi akara akụrụngwa dị ka ndị a: 1). Mbukota mkpakọ nut, 2) Ngabiga bolt, 3) Ofu pin, 4) mbukota, 5) mbukota uwe, 6) Mbukota mgbali efere (mgbe ụfọdụ 5 na 6 na-akụkụ dị ka ebu na Kpebisiri ike site dị iche iche na-arụ ọrụ ọnọdụ, n'ozuzu ọrụ bụ otu ihe ahụ na nke gbawara)
Ihe ngbadochi ihe ngbado uzo bu ndia:
1. Jiri akwa iji wepu 1) mbukota mkpakọ nut ma bulie ya 5) mbukota pịa aka uwe na 6) mbukota pịa efere, na-ahapụ ohere maka ọrụ nke dochie mbukota.
2. Jiri mpempe akwụkwọ dị larịị ma ọ bụ mpempe akwụkwọ ndị ọzọ wepụ ihe mgbochi mbụ wee dochie ya. Ọ bụrụ na-eji mbukota mbukota na-eji, mgbe wụnye ọhụrụ mbukota, ntị na ntụziaka nke mbukota he ga-kpuchie site 90 ~ 180 Celsius, na gụnyere n'akuku ga-ugboro ugboro abụọ. Enwela otutu uzo di iche na uzo ozo dika egosiri na onu ogugu;
3. Mgbe ị wụnye ihe kwesịrị ekwesị nke mbukota, weghachi 5) mbukota gland na 6) mbukota nrụgide efere echichi. Mgbe ị na wụnye, attentionaa ntị na ọnọdụ nke mbukota akara na 6 ~ 10mm miri n'ime valvụ mkpuchi (ma ọ bụ 1.5 ~ 2 ugboro mbukota ọkpụrụkpụ) dị ka n'ọnọdu akwụkwọ (Dị ka e gosiri n'okpuru).
4. Weghachi 1). Mbukota mkpakọ nut, 2) Sie ike echichi ọnọdụ nke nkwonkwo bolt ruo mgbe ọ ruru 20% nke mbukota mkpakọ.
5. Mgbe ịmechara usoro ndị a dị n'elu, mee nyocha ndị dị mkpa na valvụ nke dochiela mbukota na ojiji ọzọ iji hụ ma ọ dị mkpa ịbawanye preload nke mbukota.
Ntughari: Ntuziaka na ịmachi ma dochie mkpọ nke nrụgide.
Ọrụ ndị a bụ arụmọrụ dị egwu. Biko egbula ha nke ọma ma ọ bụrụ na ha adịghị mkpa. Biko gbasoro akwụkwọ ntuziaka a n'oge usoro ọrụ:
1. Onye na-arụ ọrụ kwesịrị inwe nghọta ụfọdụ banyere igwe na valvụ. Na mgbakwunye na ngwaọrụ ndị achọrọ, onye ọrụ ahụ ga-eyi uwe aka na-ekpuchi ọkụ, ọta ihu, na okpu agha.
2. A na-emeghe valvụ ahụ ruo mgbe akara elu nke valvụ ahụ dị irè. Ndabere ikpe bụ na usoro ọrụ valvụ enweghị ike ibuli eriri valvụ ahụ, ọ nweghịkwa ụda na-adịghị mma na valvụ ahụ.
3. Onye na-arụ ọrụ ahụ kwesịrị ịnọ n'akụkụ ọnọdụ nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ enweghị ike ịkọwapụta. Amachibidoro ya iwu ihu ọnọdụ nchịkọta. Mgbe ekwesiri ịkwado ngwugwu ahụ, jiri eriri iji mee ka 1) Mkpakọ mkpakọ mkpị, ezé 2 ~ 4, akụkụ abụọ nke ngwugwu mkpakọ ngwugwu Ọ kwesịrị ka emee ya, ọ bụghị naanị otu akụkụ.
4. Mgbe ekwesiri idochi ngwugwu ahụ, jiri eriri mmiri iji tọpụ 1) Ngwakọ mkpakọ mkpị, ezé 2 ~ 4, ekwesiri imechi mkpakọ ngwugwu n'akụkụ abụọ. N'oge a, ọ bụrụ na enwere mmeghachi omume na-adịghị mma site na valvụ valvụ ahụ, kwụsị ozugbo ma tọgharịa mkpụrụ ahụ, gaa n'ihu Na-arụ ọrụ ọrụ valvụ ahụ dịka usoro ahụ dị na nzọụkwụ 2, mezue akara na valvụ valvụ ahụ ruo mgbe ọ dị irè, ma gaa n'ihu dochie mbukota. A naghị ekwe ka a dochie ngwugwu nnọchi na nrụgide kpamkpam ewezuga ọnọdụ pụrụ iche. Nnọchi nnọchi bụ 1/3 nke ngụkọta mbukota. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ikpe ikpe, enwere ike dochie ngwugwu atọ kachasị elu. Mgbe echichi ahụ mechara, weghachite nwụnye nke 5 mbukota pịa aka uwe na 6 mbukota pịa efere. Mgbe ị na wụnye, payaa ntị na ọnọdụ nke mbukota akara na 6 ~ 10mm miri n'ime valvụ mkpuchi (ma ọ bụ 1.5 ~ 2 ugboro ọkpụrụkpụ nke mbukota) dị ka n'ọnọdu akwụkwọ. Weghachi 1). Mbukota mkpakọ nut, 2) Kedo sikwuo ike echichi ọnọdụ nke nkwonkwo bolt 25% nke kacha mkpakọ nke mbukota. Ọ bụrụ na enweghị ụcha mmiri na ngwugwu ngwugwu ala, ọ zuru ezu. Ọ bụrụ na enwere ịpụpụ mmiri, soro usoro ahụ na usoro nke abụọ na nke atọ iji mee ka ọ sie ike.
5. Nzọụkwụ ọrụ niile a dị n'elu bụ naanị maka ịgbago valvụ na-ebili, dị ka: valvụ na-ebili elu, na-ebili na-akwụsị valvụ, wdg. azuokokoosisi akwụsị valvụ, urukurubụba valvụ, Ball valves na na.